Su’aalaha ku gadaaman baxsashada Cabdirashiid Janan - BBC News Somali
Su’aalaha ku gadaaman baxsashada Cabdirashiid Janan
Image caption Cabdirashiid Xasan Cabdinuur(Janan)
Mar uu Janan qudhiisa la hadlayay BBC-da wuxuu sheegay inay jiraan "dad ku caawiyay tallaabadaas", laakiin uusan magacaabeynin.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha(Human Rights Watch) ayaa soo saartay warbixin ay diiradda ku saareyso su'aalo badan oo ku gadaaman baxsashada Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, oo loo yaqaanno "Cabdirashiid Janan".
Hay'adda Amnesty International, oo iyana safka hore uga jirta ururrada u dooda xuquuqda aadanaha, ayaa sidoo horay u muujisay walaaca ay ka qabtay baxsashada siyaasigan ku eedeysan dambiyada, iyadoo dalbatay in la xaqiiqiyo dib usoo xiristiisa.
Image caption Cabdirashiid Janan waa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland
Human Rights Watch waxay qormada ku saabsan Cabdirashiid Janan ku soo bandhigtay su'aalo iyo Jawaabahooda macquulka ah.
Su'aalaha HRW, oo dhammaantood la xiriira sida ay dowladda Federaalka Soomaaliya u maareysay xarigga Cabdirashiid Janan, waxaa ka mid ah:
Waxay hay'addu sheegtay in dhammaan su'aalahan ay u baahan yihiin baaritaan iyo jawaabo ku habboon.
Dowladda Soomalaiya wali wax war ah kama soo saarin hadalkan u dambeeyay ee ka sooo yeray hay'adda.
Waxyaabaha kale ee aan laga heli karin Soomaaliya marka dacwad lasoo oogayo ayey ku qeexday jiritaan la'aanta hannaan khaas ah iyo ilaalinta dadka dhibbaneyaasha ah.
"Markhaatiyaasha iyo dhibbaneyaasha ayaan inta badan amnigooda la sugin, sidoo kalena waxaa khatar ku jira shaqaalaha waaxda caddaaladda", ayaa lagu yiri warbixinta HRW.
Sida ay qormadeeda ku sheegtay hay'addu, Sanadkii lasoo dhaafay, dowladda federaalka Soomaaliya waxay magaalada caasimadda ah ka abuurtay maxkamad iyo xabsi. Waxay ujeeddada loo dhisay ahayd in lagula tacaalo dadka loo heysto falalka la xiriira kooxda hubeysan ee al-Shabaab, kuwaasoo laga soo weecinayo maxkamadaha milatariga, loona soo wareejinayo kuwa rayidka.
Iyadoo ay intaasi jirta ayaa HRW waxa ku talisay "sidii loo dhisi lahaa qeybo khaas ah, khibrad ku dhisantahay, oo qabilsanaada islamarkaana baaritaan ku sameeya, dacwadona kusoo ooga dadka lagu tuhmo dambiyada dagaal, kuwa ka dhanka ah bani'aadannimada iyo waliba tacaddiyada kaleba"
"Tani waxay wax lagu farxo u ahaan lahayd dhibbaneyaasha iyo qoysaskooda, kuwaasoo arki lahaa kuwa la tuhunsan yahay, sida Cadirashid Janan, oo ugu dambeyn caddaaladda la horkeenay", ayay sii raacisay HRW.
Image caption M ajirto xog rasmi ah oo ilaa hadda laga hayo qaabkii uu ku baxsaday Cabdirashiid Janan iyo cidda ka dambeysay